Kooxda Arsenal oo u weecatay horyaalka Serie A kadib markii ay ku fashilmeen baadi goobkii Jamie Vardy. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kooxda Arsenal oo u weecatay horyaalka Serie A kadib markii ay ku fashilmeen baadi goobkii Jamie Vardy.
Kooxda Arsenal oo u weecatay horyaalka Serie A kadib markii ay ku fashilmeen baadi goobkii Jamie Vardy.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 24-06-16 12:32 PM Kooxda kubada cagta Arsenal ayaa u muuqata mid ku fashilantay baadi goobkii ay ugu jirtay weeraryahanka kooxda Liecester City Jamie Vardy kaasoo ka doortay Gunners ka kooxda Dawacada inuu baaqi isaga sii ahaado.
Kooxda Arsenal ayaa u weecaneysa sidii ay kula soo saxiixan laheyd ciyaaryahanka u dhashay dalka Argentine weerarkana ugu ciyaara kooxda reer Talyaani Mauro Icardi.
Mauro Icardi oo kooxdiisa u dhaliyey 16 gool xilli ciyaareedkii tagay ayey kooxda Arsenal ku dalban doontaa 32 Milyan oo ginni waa sida lagu daabacay Talk Sports Maanta.
23 Sano jirkan ayey macquul tahay inuu isaga soo hayaamo kooxda reer Talyaani kadib marki ay ku fashilantay iney usoo gudubto kana mid noqoto kooxaha ka qeyb galyo koobka horyaalada Yurub ee Champions xilli ciyaareedka soo aadan.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in Mauro Icardi uu kasoo muuqday kaliya hal jeer xulka dalkiisa Argentina tan iyo markii xulkaas macalin loogaaga dhigay Tata Martino oo horey macalin ugu soo ahaa kooxda Barcelona.